Relay Gaarka ah ee iCloud wuxuu noqonayaa astaamaha beta ee ugu dambeeyay ee macruufka 15 | Wararka IPhone
iCloud Private Relay wuxuu noqonayaa astaamaha beta ee ugu dambeeyay ee macruufka 15
Apple waxay ku soo bandhigtay WWDC 2021 xirmo cusub oo hoos lagu soo uruuriyay iCloud +, dheeraad ah oo cusub oo daruurtii Apple ah. Qeybtan cusub ee cusub ayaa ah Gudbinta Gaarka ah ee iCloud, nidaam awood u leh inuu kordhiyo asturnaanta marka uu daalacanaayo internetka. Dhammaan barnaamijyada betas ee uu daabacay Big Apple, shaqadu waxay u muuqatay mid firfircoon oo si buuxda u shaqeyneysa. Si kastaba ha ahaatee, Apple waxay go'aansatay inay ka dhigto iCloud Private Relay beta dadweyne kaas oo naafo ahaan u ah naafo iPadOS beta 7 iyo macruufka 15.
1 Gudbinta Gaarka ah ee iCloud - waa hab aamin ah oo gaar loo leeyahay oo laga raadiyo macruufka, macOS, iyo iPadOS
2 IOS 15 ayaa lagu sii dayn doonaa astaantan sida beta dadweyne
Gudbinta Gaarka ah ee iCloud - waa hab aamin ah oo gaar loo leeyahay oo laga raadiyo macruufka, macOS, iyo iPadOS
Gudbinta Gaarka ah ee ICloud ama iCloud Relay Private Relay waa a nidaamka in waxay u oggolaaneysaa taraafikada ka tagta aaladdayada in la qoro. Waxay ku gaadhaysaa tan iyada oo ay ugu wacan tahay qaab dhismeed badan oo hop ah kaas oo dhammaan codsiyada ka soo baxa iPhone ama iPad waxaa loo diraa laba relays (proxies). Waad ku mahadsan tahay labadan boodbood, waxaa loo oggol yahay in laga qariyo IP -ga saxda ah meesha aan ka shaqeyneyno. Laakiin haynta qaar ka mid ah astaamaha aasaasiga ah ee weydiinteena meel la mid ah si loo hubiyo in qaar ka mid ah adeegyada adeegyada webka.
Natiijada ugu dambeysa ayaa ah in cinwaanka IP -ga uu matalo goobta qiyaasta ee isticmaaleha laakiin cinwaanka IP -ga dhabta ah waa la daboolay isagoo la wadaagaya cinwaan aan la aqoon server -yada mareegaha. Taasna waa lagu gaaraa hab ammaan ah oo ka badan oo khaas u ah daalacashada. Khubaro badan ayaa isbarbar dhigay nidaamka VPN. Si kastaba ha ahaatee, iCloud Relay Gaarka ah kuma geli karno IP meel kale. Sidaa darteed, ma heli karno nuxurka laga yaabo in la xannibo. Waxa la gaadhay waa in la qariyo IP -ga oo leh macluumaad goob la mid ah kan dhabta ah, kaas oo ka soocaya VPN -ga caadiga ah.
Ku -gudbinta Gaarka ah ee iCloud waa adeeg kuu oggolaanaya inaad ku xirnaato ficil ahaan shabakad kasta oo aad Safari ku dhex marin karto si ka sii ammaan badan oo gaar ah. Waxay hubisaa in taraafikada ka soo baxda aaladdaada ay tahay mid sir ah oo isticmaasha laba xarig oo internet oo madaxbannaan si uusan qofna u isticmaali karin cinwaankaaga IP -ga, goobtaada iyo hawshaada daalacashada si loo abuuro astaan ​​faahfaahsan oo adiga kugu saabsan.
IOS 15 ayaa lagu sii dayn doonaa astaantan sida beta dadweyne
La yaabku wuxuu la booday markii la bilaabay beta toddobaad ee macruufka iyo iPadOS 15. Dhexdeeda, Gudbinta Gaarka ah ee iCloud ayaa naafo ahaan ahaan naafo ahayd iyo waliba qoraal cusub oo shaqada dhigay qaab beta ah. Si kale haddii loo dhigo, howshaas oo kale waxay ka tagtay inay noqoto ikhtiyaar u suurtageliyay in la doorto si hawl hore u naafo ahayd, iyadoo ku xiran tijaabada beta.
Tani waa sababta oo ah horumariyayaashu waxay ogaadeen waxqabadka iyo dhibaatooyinka marin u helka bogagga internetka qaarkood iyagoo adeegsanaya gudbinta gaarka ah ee iCloud. Xaqiiqdii, tan waxaa lagu qeexay qoraalka rasmiga ah ee wararka beta 7:
iCloud Private Relay ayaa loo sii dayn doonaa sidii beta dadweyne si loo ururiyo warcelin dheeraad ah loona hagaajiyo iswaafajinta mareegaha. (82150385)
Natiijada ugu dambaysa ee manhajkan ayaa leh farxad aad u badan marka loo eego shaqada SharePlay. Shaqadan ugu dambaysa ma arki doonto iftiinka nuqulkii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay ee macruufka 15 laakiin waxay u badan tahay, gudaha iOS 15.1. Marka laga hadlayo iCloud Relay Gaarka ah haa waxay arki doontaa iftiinka ku jira macruufka 15 oo ah nooca ugu dambeeya, ugu yaraan hadda, laakiin leh calaamad muujineysa inay weli tahay muuqaal la tijaabinayo oo ku hoos jira beta dadweyne.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » iCloud Private Relay wuxuu noqonayaa astaamaha beta ee ugu dambeeyay ee macruufka 15
Google ayaa Apple siin karta $ 15.000 bilyan si ay u ahaato mashiinka raadinta caadiga ah
Dillaac labaad ayaa si toos ah u tilmaamaya 7mm Apple Watch Series 45